Ciidamada Xooga dalka oo Al shabaab kala wareegay Deegaano ka tirsan Bakool | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamada Xooga dalka oo Al shabaab kala wareegay Deegaano ka tirsan Bakool
Ciidamada Xooga dalka oo Al shabaab kala wareegay Deegaano ka tirsan Bakool
Muqdisho (SONNA) Wararka ka Imaanaya Gobolka Bakool ayaa sheegaya in Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed ay la wareegeen deegaano ka tirsan Gobolka Gobolka Bakool ee Koonfurta Soomaaliya.
Guddoomiye ku Xigeenka Maamulka Gobolka Bakool ahna ku Simaha Guddoomiyaha C/laahi Maxmed Nuur Xuseen oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa xaqiijiyay in Dagaal xooggan oo saf balaaran ah ay qaadeen Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed ay kaga saareen Maleeshiyada Al shabaab deegaano ka tirsan Gobolka Bakool oo ay ku dhuumaaleysanayeen, isagoo xusay in Job xoogan la gaarsiiyay Argagaxisada.
Sidoo kale Guddoomiye ku Xigeenka wuxuu sheegay in hada ay degan tahay xaalada deegaanada ay la wareegeen Ciidamada Xooga dalka, dadka shacabka ay si weyn u soo dhaweeyeen.
C/laahi Maxmed Nuur Xuseen ku simaha Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Bakool Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka go’an tahay in Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee jooga Bokool in nabad diidka ah laga saaro Gobolka oo dhan.
Previous articleSoomaaliya oo ka qeybgashay shir ku saabsan arrimaha Garsoorka oo Murataaniya ka dhacay+Sawirro
Next articleRa’iisul wasaare Kheyre oo u Ambabaxay Dalka Turkiga